दु:खद खबर : कक्षा ११ को परीक्षा दिन जाँदै गरेका दिदीभाइ माथि घट्यो सोच्नै नसकिने घटना !! - Babal Khabar
दु:खद खबर : कक्षा ११ को परीक्षा दिन जाँदै गरेका दिदीभाइ माथि घट्यो सोच्नै नसकिने घटना !!
उदयपुरमा स्कुटर दुर्घटना हुदा कक्षा ११ को परीक्षा दिन हिडेकी एक युवतीको ज्यान गएको छ । जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका १० स्थित मदन भण्डारी आँखा अस्पताल नजिक सोमबार विहान करिव ७ः०० बजे भएको स्कुटर दुर्घटना १९ वर्षीया प्रिया बुढाथोकी र उनको भाई घाईते भएका थिए ।
घाइते अवस्थामा रहेका दुवैलाई तत्काल उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल उदयपुर पु¥याइएको थियो । जिल्ला अस्पतालमा उपचार नहुने भएपछि बिराटनगर पु¥याएर उपचार हुदैगर्दा उनले ज्यान गुमाएकी हुन् । प्रियाको १३ वर्षीय भाई युनिकको अवस्था भने सामान्य रहेको बताइएको छ । प्रियाको परीक्षाका लागि राजाबासबाट गाईघाट को ४९ प ९०७० नम्बरको स्कुटर चढेर दिदीभाई सँगै आउदै गर्दा सडकमा कुकूर जोगाउँन खोज्दा दुर्घटना भएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीलाई उधृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ । मृतक प्रिया उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटस्थित प्याराडाइज बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा ११ को परीक्षा विद्यार्थी रहेको प्रिन्सीपल बाबुराम आचार्यले बताए । *** यो समाचार पुरा हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
यो पनि हामी अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौँ। सुन्दर, गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधैँ प्रयासरत पनि हुन्छौँ।क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौँ। तर घरेलु उपाय भने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। अनुहार चम्काउन र सफा बनाउन सक्ने घरेलु उपाय धेरै छनः
१) यदि चर्को घाममा तपाईंको छालाको रङ फिक्का या कालो भएको छ भने काँचो टमाटरलाई मिचेर मोही हालेर अनुहार र छालामा लगाउनुहोस्, छालालाई शीतलता प्रदान हुनेछ र कालोपना पनि हट्नेछ।
२) नुहाउने पानीमा एक गिलास लस्सी हालेर नुहाउनाले पनि बिस्तारै बिस्तारै सनटेन हट्नेछ।
३) एक सानो चम्चा काँक्राको रस, आधा चम्चा ग्लिसिरिन र एक चम्चा गुलाबजल मिलाएर घामले डढेको छालामा लगाउनाले छाला नरम र गोरो हुँदै जानेछ।
४) टमाटर र दही बराबर मात्रामा लिएर राम्ररी फिट्नुस् र यो मिश्रणलाई छालामा लगाएर १० मिनेटसम्म राख्नुस् र चिसो पानीले धुनुहोस् । यो सनबर्नको लागि राम्रो टनिक हो।
५) काँचो दूधमा गुलाबजल हालेर कपासले छालामा लगाउनुहोस्। यसो गर्दा छालाको पुरै मैला कपासमा आउनेछ।
६) चन्दन पिसेर त्यसमा गुलाबजलका केही थोपाहरू हालेर बनाइएको लेप अनुहारमा लगाउनाले छालालाई शीतलता पुग्छ ।
७) कागती र मोही मिलाएर लगाउनाले घामका कारणले कालो भएको अनुहारमा निखार आउँछ ।
८) एक चम्चा मख्खन र एक चम्चा पानी मिलाएर फिट्नुस्, घाममा डढेको छालामा लगाउनुस्। यसले धेरै नै फाइदा गर्छ।
९) दुई चम्चा काँक्राको रसमा एक चम्चा काँचो दूध हाल्नुस् र यसलाई कपासले अनुहार र गर्धनमा लगाउनुहोस् । यसबाट छालाको छिद्र खुल्छन् र धुलो तथा अतिरिक्त चिल्लोपना हट्छ अर्थात यसले क्लिन्जिङको काम गर्छ।
१०) एउटा स्याउलाई पिसेर अनुहारमा लेप गर्नुहोस्। आधा घण्टापछि मनतातो पानीले अनुहार सफा गरेपछि छालाको चिल्लोपना काम भएर छालालाई कान्तिमय र नयाँ स्फुर्ती प्रदान भएको अनुभव हुनेछ।
११) छाला अति नै चिल्लो छर मेकअप रहँदैन भने बरफको टुक्रा दूधमा भिजाएर अनुहारमा दल्नुस्। यसबाट ताजगी र स्फुर्ती आउनेछ साथै चिल्लोपना रहने छैन।
१२) छालामा तुरुन्त स्फुर्ती ल्याउनका लागि कागतीको रस बराबर मात्रामा पानी हालेर त्यसलाई ट्रेमा जमाइदिनुस् । यो आइस क्युबलाई अनुहारमा दल्नुस्। चिल्लोपना नियन्त्रणमा आउँछ।
१३) चिल्लो छाला भएका व्यक्तिहरूले कागतीको रस र त्यसको बोक्रालाई अनुहारमा दल्नाले फाइदा हुन्छ।
१५) शीघ्र छालाको सफाइका लागि अंगुरको अर्धरस निकालेर बाँकी गुदी आफ्नो अनुहारमा रगड्नुस्। अंगुर अम्लीय हुन्छ, अतः रुखो र चिल्लो छालालाई समान रूपले पोषण र सफाइ गर्छ।
Prevसावधान: के तपाईंको मोबाइलबाट थाहै नपाइ ब्यालेन्स सकिन्छ ? इन्टरनेट चलाउने सबैले अवश्य पढ्नुहोला !!
nextBreaking- काठमाडौंमा सङ्क्रमण अत्यन्तै बढेसँगै लागु भयो यस्तो नियम, आफ्नै सबारी साधन चलाउने सबैले एकपटक अवश्य पढ्नुहोला !!